DHEGEYSO-Barnaamijkii xulashada iyo Axmed Maxamed Nadiif. – Radio Daljir
DHEGEYSO-Barnaamijkii xulashada iyo Axmed Maxamed Nadiif.
Janaayo 24, 2017 2:51 b 0
Buuhoodle, Jan 24 2017--Kulan wanaagsan kusoo dhowaada barnaamijkii duhurnimo ee xulashada Daljir oo xiiso gaar ah xambaarsan, waxaana maanta xarunta Idaacadda Daljir ee magaalada Buuhoodle kasoo jeedinaya Axmed Maxamed Nadiif.
DHEGEYSO-Maamulka gobolka Nugaal oo samaynaya xarumo lagu ilaaliyo qiimaha sarifka.
DHEGEYSO-Ciidanka Jubbaland oo Alshabaab kala wareegey Badhaadhe.